Pro Skin – Face Spa & Aesthetic Centre | Beauty MM
သငျစိတျကူးထားတဲ့ အလှတရားကို ဖနျတီးနိုငျဖို့ အခုဘဲ စတငျလိုကျပါ
Pro Skin – Face Spa &#…
Pro Skin – Face Spa & Aesthetic Centre
အင်္ဂလန် နှင့် ဘန်ကောက်ရှိ အစိုးရဆေးရုံတုိ့တွင် အရေပြားနှင့်အလှအပဆိုင်ရာ ဆေးပညာ အတွေ့အကြုံရှိသည့် ဆရာဝန်မှ တစ်ဦးချင်းစီ၏ လိုအပ်ချက်များကို ဆွေးနွေးတိုင်ပင်ကုသပေးမည်ဖြစ်ပါသည်။
Pro Skin မှ ကြိုဆိုပါတယ်…
အရေပြား ဆရာဝန် ၏ ကြည့်ကြပ် မှုဖြင့် မိမိ၏ မျက်နှာ အရေပြား ပုံစံနှင့် သင့်တော်သော treatment အမျိုးအစားများကို Sothys, Valmont စသော international premium quality productsများ နှင့် clinical skin care တို့ ပေါင်းစပ်ကာ ကုသပေးနေပြီနော်. . .
Open Hours – 11:00 AM – 9:00 PM
09 777 669898
Shin Sawpu Pagoda Road (0.57 mi),Sanchaung, Yangon.
Pro Body Treatments
🔸 Pro Oil Massage (1:30 hr) 35,000ks
🔸 Body Srub (45 mins) 35,000ks
🔸 The Serenity Package (11:30 hrs)
Body Scrub 50,000ks
🔸 The Serenity Package2(2 hrs)
Body Massage (oil/cream)
Body Lotion 60,000ks
Pro Aesthetic Treatments
1.Whitening Program (10 times)
2.Hair Growth Program (3 times)
မျက်နှာ V-shape ပုံဖော်ခြင်း 600,000-800,000ks
နှာခေါင်း ပုံဖော်ခြင်း 300,000-500,000ks
7.Weight Loss Program (10 times )
9.Face Slimming Program (10 times)
10.Special Vip Anti-aging Program
(over 45 years old)
Structured2months program
Premium Antiaging Treatment2times plus
Thread lift.Botox ,Filler ( 1 times) 800,000ks
🔸Vitiligo သမင်ဖြူ၊ ခရုသင်းကုသခြင်း 30,000ks-60,000ks
And Other Skin Diseases
1.Half Legs Waxing 15,000ks
2.Full legs Waxing 25,000ks
3.Arms Waxing 10,000ks
4.Hand Waxing 20,000ks
MY AURA Aesthetic Clinic
MY AURA Aesthetic Clinic မှကြိုဆိုပါတယ် ။ ခေတ်မီနည်းပညာတွေနဲ့ အကောင်းဆုံးကုသမှုပြုလုပ်ပေးနေပါပြီ။ ၀န်ဆောင်မှုအကောင်းဆုံးဖြစ်အောင်လည်းစီစဉ်ထားသောကြောင့် ပြုပြင်ပြောင်းလဲလိုသူများအတွက် အဆင်ပြေချောမွေ့ စေပါတယ်။
Clinic SEVEN skin and laser clinic
Clinic SEVEN မှကြိုဆိုပါတယ်...ကျွမ်းကျင်တဲ့ မြန်မာနိုင်ငံဆေးကောင်စီအသိမှတ်ပြု ခွဲစိတ်ဆရာဝန်ကြီးတွေ ကိုယ်တိုင် ခွဲစိတ်ပြုပြင်မှု များ ပြုလုပ်ပေးလျက်ရှိပါတယ်ရှင့်
ဆရာဝန်တွေကိုယ်တိုင်ရှိပြီး အလှအပနှင့် ပတ်သတ်သမျှကို USAနိုင်ငံ အသိအမှတ်ပြု အလှအပဆိုင်ရာဘွဲ့လွန်ပညာကို ဆည်းပူးတတ်မြောက်ထားသော အလှအပဆိုင်ရာဆရာဝန် ကိုယ်တိုင်ပြုလုပ်ပေးနေသော ဆေးခန်းဖြစ်ပါသည်။ Warmly welcome ပါနော်….
ရွေးချယ်စရာ များတဲ့ခေတ်ကြီးထဲမှာ အသားအရေ အတွက်ကော အလှအပအတွက်ပါ Aesthetics ဆေးခန်းတွေ အများကြီးထဲကမှ PAN Aesthetics ကသင့်အတွက် အကောင်းဆုံး အလှတရားတွေ ဖန်တီးပေး နေပြီနော်
Face Art Aesthetic & Skin Laser Cli…
Beauty Box Aesthetic,MediSpa & Plas…
Delight Aesthetic Centre
Copyright © Beauty MM